Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : solontena mpaneho ny hetahetam-bahoaka | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : solontena mpaneho ny hetahetam-bahoaka
Nihoa-pefy raha arahana ara-bakiteny ireo solombavam-bahoaka 73 mianadahy tany am-piandohan’ ny hetsika izay nahatonga an’izao fanitsiana ny fitantanana eto amin’ny firenena izao. Azo heverina koa fa tsy manaraka an-tsakany sy an-davany ny voasoratra ao anatin’ny Lalàmpanorenana ny rafitra nahafahana nivoaka vonjy maika avy ao anatin’ny kizo nisy. Sarotra anefa no hanome tsiny an’ilay vondron’ny depiote 73 ary tsy nisy sahy nanameloka mivantana ny hetsika notarihana izay nitarika fahasahiranana rehefa nibaribary ny tsy fetezan’ny fitantanana.
Raha nisy ihany ireo nitady hanankina ny fidinan’izy ireo an’arabe tany am-boalohany, nangina daholo rehefa nazava fa an-drariny ny antony nanaovany an’izany. Na teo ihany aza ireo tefitefy nosontonina avy ao anatin’ny Lalàmpanorenana nahafahana ny nametraka rafitra vonjy maika ho famahana ny olana, dia voalohany izao no nisy hetsika mafampana nateza teny an-dalambe izay tsy niafara tamin’ny fanonganam-panjakana. Noho izany sarotra ho an’ireo mpitarika ny mamarana an’ilay hetsika nanaingany vahoaka.
Misy mantsy ireo olona tsy afa-po amin’ny fahazoana tapany raha erany no notakiana. Eo koa ny alahelon’ny sasantsasany amin’ireo depiote noho ny tsy fahazoany manokana valim-pandresena nefa izy hono no anisan’ny nahafaty baolina. Adinon’izy ireo angamba fa izy ity anie tsy lalao fa raharaham-pirenena ka tsy sehatra itetehana tombotsoa manokana fa ezaky ny tsirairay arak’izay fiheverany ho an’ny filaminana sy fandroson’ny firenena.
Raha mikasika an’izy 73 mianadahy, moa tsy izy ireo ihany ve no niteny fa zo sy adidiny amin’ny maha solombavambahoaka ny fanaovana an’iny hetsika iny? Izany hoe efa ahazoany tambiny hatrany. Sao kosa misy mihevitra fa izay rehetra manefa ny adidiny arak’izay tokony ho izy dia mendrika valisoa amboniny.
Aoka re ! Raha dinihina amin’ny saina sy fo tsy miangatra, tsy misy afaka milaza fa mahihitra na kadity ny fanjakana malagasy momba ny fametrahana fetra mikasika ny valin-kasasaran’ireo manam-pahefana sy manamboninahitra voalaza ho mpanompom-pirenena ambony. Tsy ifandrombahana toy izao anie ny toerana minisitra raha tsy eo ny tombontsoa mihoa-pampana sitrahana eo amin’izany fiandrianana izany. Manginy fotsiny ny nofinofy momba ny fahafahana manao afera. Latsa-danja angamba raha ampitahaina amin’izany ny tamby ho an’ny parlemantera. Afaka dinihina ny momba izay. Na izany aza, amin’ny lafiny iray moa ve tsy efa tafahoatra raha miainga avy aty amin’ny fari-piainan’ny maro an’isa eo amin’ny mponina ny fandinihana? Tsy solom-bava solontenam-pihinanana sanatria fa solom-bava ho an’ny fanehoana ny hetaheta.